Ny Samsung Galaxy A8 (2018) dia efa amidy any Espana | Androidsis
Ny Samsung Galaxy A8 (2018) dia efa amidy any Espana
Andro vitsy lasa izay, nilaza taminay izahay fa ny Galaxy A8 (2018) dia azo amidy any Netherlands. Eny, hanaraka io tsipika io ihany, Samsung dia nametraka ity finday ity amidy any Espana avy amin'ny mpandraharaha Movistar sy Vodafone.
Tadidio fa ity smartphone ity dia natomboka herinandro vitsivitsy lasa izay, ary dia miaraka amin'ny endri-javatra sy ny masontsivana izay eo anelanelan'ny mid-range sy ny avo-end, na dia manitsaka betsaka kokoa aza amin'ny voalohany noho ilay faharoa.
Ity fitaovana ity dia azo vidiana amin'ny alàlan'ny Movistar sy Vodafone amin'ny alàlan'ny drafitra fandoavambola isam-bolana, na amin'ny vidiny voalohany, ary vola, manodidina ny 499 euro any Movistar, ary 479.99 euro eo ho eo ao Vodafone. Manova zavatra momba ny vidin'ity fitaovana ity any Holandy izay 449 euro fotsiny.
En Espaina MovistarAraka ny efa nolazainay teo aloha, ity terminal ity dia mitentina 499 euro amin'ny vola, tafiditra ao ny haba, ary azonao atao eny an-tananao amin'ny loko mainty ihany izany, na dia azonao atao aza ny mividy azy amin'ny sarany 18.98 euro isam-bolana mandritra ny 30 volana.
Amin'ny lafiny iray, en Vodafone, ny Galaxy A8 (2018) dia somary mora vidy kokoa, ary amidy amina vola 479.99 euro eo ho eo ihany, na eo amin'ny 20 euro isam-bolana mandritra ny 24 volana tsy misy fandoavambola, na amin'ny 37 euro isam-bolana mandritra ny 18 volana.
Tadidio izany Ity terminal ity dia manana efijery tsy manam-petra Super AMOLED 5.6 amin'ny endrika 18: 6, miaraka amin'ny processeur Samsung Exynos 7885 octa-core 2.2 GHz, Mali-G71 GPU, 4GB RAM, ary 32GB habaka fitehirizana anatiny. Izy io koa dia manana mari-pankasitrahana IP68 izay mahatonga azy mahatohitra ny rano sy ny vovoka, Android 7.1.1 Nougat, fakan-tsary 16MP aoriana misy f / 1.7 aperture ary LED Flash, fakan-tsary 16MP + 8MP front front, ary raha tsy ampy izany , manana fantsom-panafody sy fanekena tarehy Face Unlock.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Samsung Galaxy A8 (2018) dia efa amidy any Espana
Sary navoakan'ny Moto E5 voalohany